Betony - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Betony
Betony ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Betony ဟာ mint မျိုးနွယ်ဝင် အပင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အနောက်ပိုင်းနဲ့ တောင်ဥရောပတွေမှာ အနှံ့အပြား ဖြန့်ဝေ အသုံးပြုကြပါတယ်။ Betony ကို အခြောက်ခံပြီး ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။
Betony ဟာ သွေးတိတ်စေတဲ့ ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အာလုပ်ကျင်းရည် (သို့) လက်ဖက်ရည် အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို စိတ်ပူပန်ခြင်းတွေကို ကုသဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပြီး တင်ချာရည် (သို့) အငွေ့အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Betony ကို အောက်ပါ အခြေအနေတွေကိုကုသဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အစာခြေ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တဲ့ ရင်ပူခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ လေထခြင်း
လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ် အစရှိတဲ့ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ပြဿနာများ
နာကျင်တဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ ဂေါက်ရောဂါ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မျက်နှာနာခြင်း
ဆီးအိမ်နဲ့ ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည်ခြင်း၊ ဆီးအိမ်နာခြင်း၊ ရောင်ခြင်း အစရှိတဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ
စိတ်ဖိစီးမှု၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ တက်ခြင်း
အခြားအပင်တွေနဲ့ ရောသုံးရင် Betony ကို အာရုံကြောကြောင့် နာကျင်ခြင်းနဲ့ စိတ်ပူခြင်းတွေ အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Betony ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လေ့လာမှု အချို့ကတော့ သူ့မှာ အောက်ပါ အာနိသင်တွေ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သွေးတိတ်စေခြင်း၊ ဝမ်းလျှောတာ ရပ်စေခြင်း
သူ့မှာ tannin content များတာကြောင့် Betony ကို ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ပါးစပ်၊ လည်ပင်း ယားယံခြင်းတွေကို ကုသဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ Betony ကို ဝမ်းပိတ်ဆေးအဖြစ် သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ လေ့လာမှုတွေကို တိရိစ္ဆာန်တွေ မှာရော လူတွေမှာပါ ပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။
Betony ဟာ စိတ်ငြိမ်စေတဲ့ အစွမ်းတွေ ပါဝင်ပြီး အာရုံကြော တင်းကျပ်မှုနဲ့ နာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ Betony ကို စိတ်ငြိမ်ဆေးအဖြစ် သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ လေ့လာမှုတွေကို တိရိစ္ဆာန်တွေ မှာရော လူတွေမှာပါ ပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။ အခြားအပင်တွေ ဖြစ်တဲ့ comfrey (သို့) linden တို့နဲ့ ပေါင်းပြီး အသုံးပြုရင် သူဟာ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ ချွဲကျပ်ခြင်းတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
Betony ကို အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Betony ဟာ သွေးပေါင်ကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုလုပ်နေစဉ်နဲ့ လုပ်အပြီးမှာ သွေးပေါင်ထိန်းချုပ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ခွဲစိတ်မှု မပြုလုပ်ခင် အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ကြိုပြီး အသုံးပြုမှု ရပ်တန့်သင့်ပါတယ်။
သွေးပေါင်၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အသည်းလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုတွေကို Betony သုံးစဉ်မှာ အသည်းပျက်စီးခြင်းကို သိရှိစေဖို့ အမြဲစစ်ဆေးနေသင့်ပါတယ်။
Betony ကို အေးမြပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာတွေမှာ ထားသင့်ပြီး အပူနဲ့ ရေငွေ့ရိုက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
Betony က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
Betony ဟာသားအိမ် ကို လှုံ့ဆော်နိုင်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ်အတွင်းမှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ နို့တိုက်နေစဉ်မှာ ဒီအပင်အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပြီး နောက်ထပ် လေ့လာမှုတွေ မရှိမချင်း ကလေးတွေမှာလည်း အသုံးပြုဖို့ မသင့်ပါဘူး။
ပမာဏ အများကြီး အသုံးပြုခြင်းဟာ အစာခြေလမ်းကြောင်း ယားယံမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ပမာဏ အနည်းငယ်ကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Betony ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Betony ကနေ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အသည်းပျက်စီးခြင်း၊ အစာခြေလမ်းကြောင်း ယားယံခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ် မရှိခြင်း
Betony ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Betony ဟာ သွေးပေါင်ကျစေနိုင်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ကျတတ်တဲ့သူတွေမှာ သွေးပေါင်ပိုပြီး ကျစေနိုင်ပါတယ်။
Betony အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Betony ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
Betony ကို လက်ဖက်ရည်၊ အာလုပ်ရည်နဲ့ အငွေ့အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Betony ကို တင်ချာရည် အဖြစ်သုံးမယ် ဆိုရင် 2-4ml ကို တစ်နေ့မှာ ၂ခါကနေ ၃ခါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Betony ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Betony က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Betony ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001.Print version. Page 68.
Betony. http://www.drugs.com/npc/betony.html. Assessed August 3, 2016.
Betony. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 587-betony.aspx?activeingredientid=587&activeingredientname=betony. Assessed August 3, 2016.
ကိုယ်ဝန် ဒုတိယ ၃လ ( 2nd trimester ) အကြောင်း သိထားသင့်သမျှ ။ ။